Hatsaraina ny tranoben'ny tanora, homena sehatra ny fanatanjahantena, hamafisina ny fampiofanana. Isan'ny voaresaka ireo nandritra ny fitsidihan'ny vadin'ny Filoham-pirenena ny tranoben'ny tanora tao Toliara ny asabotsy teo. Io toerana io izay nahazo fampitaovana avy @ Fikambanana Fitia tamin'ny taona 2012 ary mbola voakajokaja fito taona aty aoriana.
FILOHA NAMANGY TANY AMIN’NY HJRA
Tonga naneho ny fiaraha-miory tamin’ny fianakavian’ireo niharam-boina noho ny fifanosehana tetsy Mahamasina ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA sy ramatoa vadiny ny alin’ny 26 jona. Nitondra ihany koa fanampiana ho an’ireo naratra. Miara-ory amin’ny vahoaka ny fitondrana ary miara-mizaka koa. Nankahery ireo namoy Havana tsy fidiny, ny filoha ary nitondra ny teny famangiana ho azy ireo.